Isiqithi saseOhana: Iintyatyambo eziqhumayo kwaye wakhe iiCheats&Ukuqhawula – Iingcebiso ze-Android cheats
Isiqithi saseOhana: Iintyatyambo eziqhumayo kwaye wakhe iiCheats&Ukuqhawula
Ulibale ngako konke ukuphithizela kwesi sixeko, kwaye uphile ubomi obukude nexhala kumdlalo omtsha wokuthelekisa “Isiqithi saseOhana”🏝️!
Tyhila iifestile ezivulekileyo, phefumla umoya omtsha, kwaye wonwabele iipuzzle & 🌼iintyatyambo ezithambileyo kwivenkile yakho 🌴elwandle⛵.
Umdlalo kunye nokudubula iphazili, yakha kwaye uyila ivenkile yakho, yenza abahlobo abatsha, zuza imivuzo, tyhila iimfihlelo zesiqithi, kwaye ube ngumthengisi weentyatyambo onqwenelayo ngemidlalo elula neyonwabisayo.
Qhuba ivenkile kwaye uphile iphupha kwisiqithi sethemba, uthando, kunye nolonwabo!
・🏝️Ivenkile yakho yeentyatyambo: Sombulula imidlalo yepuzzle, khulula ubuchule bakho, kwaye uyila ivenkile yakho yeentyatyambo ukusuka kwidrab ukuya kwifab, konke njengoko uthanda! Faka kwifenitshala, khula iintyatyambo, ukuntywila kwimivuzo yemihla ngemihla, kwaye ndide ndiphakamise 😸pet🐶!
・🏝️Uyilo olulodwa lomdlalo wephazili: umdlalo & qhuma ngaphakathi 2 endaweni yomdlalo wesintu-3! Fumana iitoni zendibaniselwano eziqhumayo, iindlela zokudlala, kunye nemivuzo kwimidlalo. Mema umhlobo wakho ukuba adlale kumhlaba wolwandle & qhumisa umgangatho weentyatyambo!
🏝️Iiphazili ezahlukeneyo: ngaphaya 600 amanqanaba empompo-ukuya-uqhushumbe imidlalo ehambelanayo eyilwe nguMYBO, iqela elaziwayo lophuhliso lomdlalo elimenywe yiROVIO kuphuhliso lwalo lomdlalo wephazili “Iintaka ezinomsindo ziyaqhuma”.
🏝️Dibana nabahlobo bakho & abathengi: Yazi iqela labadlali basendle kwaye wenze ubuhlobo noLily Maka, Kiko Kilani, Lucas Sweet, kunye nabanye.
・ 🏝️Vula iimfihlo: jonga iindawo ezintsha zesiqithi, dibana nabantu abasuka kwindawo ohlala kuyo, kwaye wonwabele amabali amnandi phakathi kwabalinganiswa kumdlalo. Ngqina umtshato wothando kwaye uyile indawo ngeentyatyambo zakho!
・🏝️Imisitho yeveki: Ukuzisa amanqanaba emingeni emitsha yepuzzle ukunonga imidlalo yakho & ukufumana imivuzo!
・ 🏝️Dlala umdlalo ngaphandle kweintanethi: musa ukubeka emngciphekweni wokukruquka kwixesha elizayo xa ungakwazi ukufikelela kwi-Intanethi, gcina ivenkile yakho ivuliwe, kwaye wonwabele amanqanaba amatsha ephazili nakweyiphi na indawo nangaliphi na ixesha!
Ndiyakuthanda ukudlala isiqithi saseOhana?
Singakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo yakho okanye ukuva iingcebiso. Nceda usithumelele i-imeyile kwiinkcukacha zoqhagamshelwano:
Udidi: Ukukopela kunye nokuHacker okanye iiNgcebiso Iimpawu: Blast, Yakha, Ukukopa, iintyatyambo, Island, Ohana
← Umdlalo weskwidi 3D 2022 – Ukukopa&Ukuqhawula I-Solitaire Tripeaks Makeover – Ukukopa&Ukuqhawula →